China Hot inyauka tepi inonamira yevasina muswe zvipfeko zvemukati vagadziri uye vanotengesa | H&H
Kupisa Melt Inonamira Firimu
Yekupisa Yekutamisa Label
Auto Yemukati Kushongedza
Mabhegi Uye Mukwende
Shoes Chinyorwa Lamination
Electric Inodzivirira Nyaya
Chiedza Chinoratidza Tepi
Yakapisa yakanyunguduka tepi yekunamatira yemukati isina kupfeka
Ine kana isina pepa ne
Ukobvu / mm 0.03 / 0.05 / 0.075 / 0.1
Upamhi / m / 1.52m seyakagadziriswa
Kunyorera nzvimbo 78-140 ℃
Unyanzvi hwekushandisa muchina wekupisa-kupisa: 1 70-180 ℃ 15-25s 0.4Mpa
Ichi chigadzirwa ndechemhando yeTPU system. Iyo modhi yakave yakagadziridzwa kwemakore mazhinji kusangana nechikumbiro chevatengi chekusimba uye zvemvura-chiratidzo maficha. Pakupedzisira inoenda kune yakakura mamiriro. inoenderana nenzvimbo dzinoumbwa nezvipfeko zvemukati zvisina musono, bras, masokisi uye micheka yakasununguka ine zvinhu zvakasununguka uye zvemvura. Kuti ushandise zvipfeko zvemukati zvisina musono, zvinokurumidza kushandiswa pahum uye muchiuno musono sealing. 8mm, 10mm, 12mm, 15mm zvakajairika hupamhi vanhu vanowanzo shandisa. Kazhinji isu tinogadzira masango rolls ehupamhi 1.52m, uye tocheka sevatengi 'vanoda upamhi.
1.Kunyorova kwekunzwa ruoko: kana yaiswa pazvipfeko, chigadzirwa chichava nekupfava uye kugadzikana kupfeka.
2.Mvura-yekuwachisa inomira: kana iri inopisa temprature yekuwacha mamiriro, haizo putswa uye gara zviri maficha. Inogona kutakura kanopfuura gumi neshanu makumi mana washing kushambidza mvura.
3. Isina chepfu uye inochengetedza zvakatipoteredza: Haizoburitse kunhuwirira kusingafadzi uye haizove nepesvedzero yakaipa pahutano hwevashandi.
4. Nyore kugadzirisa pamakina uye basa-mutengo-kuchengetedza: Auto lamination muchina kugadzira, inochengetedza vashandi mutengo.
5. Elastic ficha: Ichi chigadzirwa chinoshanda nemushonga wedonje-spandex.
LQ361T Hot yakanyunguduka inonamira firimu inoshandiswa zvakanyanya ku Seamless underwear uye dzimwe mbatya dzisina musono dzinozivikanwa dzinozivikanwa nevatengi nekuda kweiri yakapfava uye yakasununguka yakapfeka kunzwa kana yekuyemura kukoshesa. Ichowo chiitiko mune ramangwana kuti kushandisa inopisa inyauka inonamira firimu yekunamira musoni panzvimbo yechinyakare kusona.Kune isina musono panties, chigadzirwa chedu chinonyanya kushandiswa mukusona kwemukati. Zvechiuno, isu zvakare tine inoenderana spandex tepi yekuwedzera kukodzera. Nekuda kwenzvimbo yaro yakanyunguduka uye tembiricha yekushanda, iyi tepi yakasununguka-inonyungudika inoita kuti chigadzirwa chekupedzisira chive nemushonga wakanaka wekupisa, uye mushandisi haazokuvadze kana kuita kuti glue rinyungudike paanoshamba nemvura inopisa. Uku ndiko kushandiswa kukuru kwechigadzirwa ichi.
LQ361T inopisa yakanyunguduka inonamira firimu, nekuda kwekusimba kwayo uye yakanyanya kusungunuka poindi, inogona zvakare kushandiswa mune zvimwe zvigadzirwa senge isina musokisi masokisi, masutu eyoga uye dzimwe nhete mbatya. Iko kugona kuri kumhanya zvakanyanya uye iko kunama kwekuita kwakanaka. Basa repepa rekuburitsa kutsvaga nzvimbo iyo inogona kuita kuti maitiro acho ave nyore. Zvichienzaniswa netekinoroji yechinyakare, zvakanakira chigadzirwa ichi zviri pachena.
Pashure: TPU Hot inyauka inonamira firimu yezvipfeko zvekunze
Zvadaro: EVA Hot inyauka inonamira firimu yeshangu
Elestric Tpu Hot Melt Firimu
Eva Hot Melt Firimu
Eva Hot Melt Webhu Firimu
Pa Hot Melt Firimu
Pa Hot Melt Glue Sheet
Pa Hot Melt Webhu Firimu
Tpu Hot Inonyunguduka Firimu
Tpu Inopisa Inyauka Glue Sheet
TPU inopisa yakanyungudutsa glue pepa re insole
Kupisa kunyauka kunamatira firimu yezvipfeko zvekunze
PES inopisa inyauka inonamira padandemutande firimu
PES inopisa inopisa nzira yekunamatira firimu
PA inopisa inyauka inonamira padandemutande firimu
Kero: 111, Kuvaka 5, Kwete. 1101, Huyi Road, Nanxiang, Jiading Dunhu, Shanghai, China
Factory Kero: Qidong guta, Jiangsu Dunhu
Runhare: +86 021 59170529
Mhomho: +86 18512142852 / + 86 13358078959